Google Analytics मा ब्याकलिंक वृद्धि कसरी हेर्ने हो?
Google एनालिटिक्स एक राम्रो पेशेवर विश्लेषणात्मक उपकरण मध्ये एक हो जसले वेबमास्टरहरु को वेबसाइट मेट्रिक्स र स्थिति को बारे मा सबै आवश्यक डेटा संग प्रदान गर्दछ।. यसले खोजी इन्जिन अनुकूलन अभियानहरूको सफलतालाई ट्रयाक गर्ने मौका दिन्छ र प्राप्त जानकारीबाट सम्बन्धित परिणामहरूमा पुग्छ. यस Google एनालिटिक्स सफ्टवेयरको अर्को स्पष्ट लाभ एक वेबसाइट ब्याकलिङ्कहरू ट्र्याक गर्ने क्षमता हो. GA बाह्य लिंकहरूमा रेफरलहरू भनिन्छ. यसैले यो तपाईलाई तपाईंको विश्लेषणात्मक रिपोर्टमा हेर्न चाहनु भएको छ.
यो लेख जानकारीको लागि समर्पित छ कि कसरी Google Analytics मा ब्याकलिङ्कहरू हेर्नुहोस् र उनीहरूले गुणस्तर र स्रोत कसरी फरक पार्छन्।. त्यसोभए, हामी जान्छौं.
गुगल एनालिटिक्स रिपोर्ट्स
मा ब्याकलिङ्कहरू हेर्न र जाँच गर्न चरणहरू सही Google प्रोफाईल रोज्नुहोस्
सुरुवात चरणमा GA संग तपाईंको सहयोग, तपाईंलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ कि तपाईं सही खाता, प्रोफाईल र हेराइहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंसँग धेरै प्रोफाईल यहाँ हुन सक्दछ र एक फरक गडबडी हुन सक्ने धेरै फरक परियोजनाहरु. तपाईंले हालै काम गरिरहनुभएको साइट पृष्ठको शीर्ष दाँया हातमा राखिनेछ. तपाइँलाई यसमा क्लिक गर्न आवश्यक छ र उपयुक्त एक चयन गर्नुहोस्.
यहाँ बैङ्क लिंकहरू अधिग्रहण डाटा द्वारा वर्गीकृत गरिएको छ।. निम्न चरणहरूले तपाईंको ब्याकलिङ्क रिपोर्ट सही रूपमा नेभिगेट गर्न मद्दत गर्नेछ:
बायाँ-ह्यान्ड मेनुमा "अधिग्रहण" क्लिक गर्नुहोस् सबै अधिग्रहण रिपोर्टहरू जाँच गर्न;
"सबै ट्राफिक" ड्रपडाउन चयन गर्नुहोस्;
"रेफरल" बटनमा क्लिक गर्नुहोस्.
रेफरल रिपोर्टले तपाईंलाई ब्याकलिङ्क डेटा प्रदान गर्दछ
सन्दर्भ यातायात स्रोतहरू Google Analytics खण्डमा फेला पार्न सकिन्छ जुन " रेफरल रिपोर्ट. "यहाँ तपाइँले तपाइँको पछाडिको बारे जानकारी र स्रोतहरू जहाँ तिनीहरूका सबै आवश्यक डेटाहरू देख्नुहुनेछ.
यहाँ केहि उन्नत गुणस्तर प्रविधिहरू छन् जुन तपाईं GA मा तपाईंको ब्याकलिङ्क रिपोर्टहरू पढ्न सक्नुहुन्छ।.
नयाँ दर्शकहरू खण्डहरू थप्नुहोस्
तपाईंको ब्याकलिङ्कलाई सङ्कलन गर्न र थप सटीक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्, दर्शकहरूलाई विभाजन लागू गर्नुहोस्. यो गुगल एनालिटिक्स टेक्निकलले तपाईलाई ब्याकलिङ्कहरू मार्फत तपाईंको साइटमा आउँदै आएको विभिन्न प्रकारका दर्शक प्रकारहरू बिच्छेद गर्न मद्दत गर्नेछ.
तपाईंको ब्याकलिङ्कहरू खण्ड गर्न, यी चरणहरू पालना गर्नुहोस्:
"सेक्सन थप्नुहोस्" बटनमा क्लिक गर्नुहोस्;
खोजी बाकस प्रयोग गर्नुहोस्;
त्यसपछि पुष्टि गर्नको लागि "लागू गर्नुहोस्" बटनमा क्लिक गर्नुहोस्;
त्यस पछि, तपाईंले नयाँ खण्ड दर्शक र तुलनात्मक डेटाको प्रतिशत देख्नुहुनेछ.
आफ्नो पछाडिको स्रोत जाँच गर्न, तपाईँ "प्राथमिक आयामहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। "GA मा प्रकार्य. पूर्वनिर्धारित प्राथमिक आयाम एक स्रोत हो. यो ट्याबमा, तपाइँ पछाडिको डोमेन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. ब्याकलिंक पृष्ठ अवलोकन गर्न, तपाइँलाई केवल डोमेन मध्ये एकमा क्लिक गर्न आवश्यक छ. त्यसो गरेर, तपाईं आफ्नो बाह्य लिङ्कहरूको सन्दर्भ मार्ग देख्न सक्नुहुनेछ.
सबै आगमन ब्याकलिङ्क स्रोतहरू जाँच गरेपछि, तपाइँ कुन ल्यान्डिङ पृष्ठहरूमा तपाइँ सन्दर्भहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ. तपाईं यी कार्यहरू पछ्याउन सक्नुहुन्छ:
"ल्यान्डिंग पृष्ठ" मा क्लिक गर्नुहोस्;
त्यसपछि सन्दर्भित ल्यान्डिंग पृष्ठहरू देखाइयो;
तपाईंको अधिग्रहण, व्यवहार, र रूपान्तरण डेटा जाँच्नुहोस्; (तपाइँ यी डेटा ट्रान्सिंग माथि हेर्न सक्नुहुन्छ) Source .